Akụkọ - Nchọpụta igwe maka Ngwaahịa Ngwaahịa: Nchekwa ma kaa akara
Nchọpụta ọla maka Ngwaahịa Ngwaahịa: Nchekwa ma kaa akara
Ebu ụzọ mepụta usoro nchọpụta igwe na UK na 1948, ma ugbu a, a na-eji ya eme ihe na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa nri.
Udiri aha gị bụ ihe niile dị na ụwa a jikọtara ọnụ, jupụta ngwaahịa. Ntinye ego na akụrụngwa nkwakọ ngwaahịa na-emepụta ngwugwu echekwara echekwa nwere ike ịme ihe dị iche. Otu ụzọ iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke ngwaahịa gị bụ ịgbakwunye nchọpụta metal na akara nkwakọ ngwaahịa gị.
Kedu ka usoro nchọpụta igwe si arụ ọrụ?
Dabere na mmesi obi ike na nchekwa nchekwa nri, a na-ahazi ndị na-achọpụta ihe na-enweghị isi na-eme ka otu ihe dị mkpa:
Ejiri eriri atọ na-emerụ ahụ na osisi na-abụghị nke ọla.
Ejikọtara eriri etiti ahụ na igwe na-ebugharị redio.
Mpịakọta abụọ na-anata nnyefe na-anọdụ n'akụkụ abụọ nke etiti eriri.
Ebe ọ bụ na eriri abụọ ahụ dị na ya na otu ụzọ dị anya site na etiti, ha na-enweta otu mgbaàmà ma mepụta otu nha nha nha nha.
Ya mere, mgbe otu ngwugwu ígwè na-agafe usoro:
Ugboro ugboro na-enwe nsogbu n'okpuru otu eriri igwe, na-agbanwe voltaji ma mebie nguzozi.
Mmepụta na-agbanwe site na efu, na-emepụta mgbaàmà na-eme ka usoro ahụ pụta na ọnụnọ nke ọla.
Dabere na usoro nke usoro ahụ, a na-arụ ọrụ ịjụkarị, yana nsonaazụ dị mma nke mwepụ nke 100 pasent nke metal na obere ego nke ngwaahịa a na-ere ere.
Kedu ihe kpatara ọrụ nkwakọ ngwaahịa ga-eji tinye ego na nchọpụta ọla?
Ichebe akara gị n'ọma ahịa bụ otu ọrụ dị mkpa onye nrụpụta nri na-arụ. Mana itinye ego iji mebe aha ọma maka mma ngwaahịa ga-efunahụ ma ọ bụrụ na echetara ya.
Ingzụlite na ịnọgide na-enwe usoro nyocha dị irè, nke a ga-egosipụta abụghịzi nhọrọ maka ndị nhazi. Nchọpụta ọla bụ ụzọ dị irè ma dịkwa oke ọnụ iji chebe ndị ahịa gị na ika gị. Mgbe price, nnyefe na ndị ọzọ na azụmahịa echiche bụ ihe dị mkpa, oru arụmọrụ ga-abụ ihe bụ isi na-akpata mgbe enyocha a metal nchọpụta iji tụkwasị obi gị ika aha.
Kedu otu m ga - esi họrọ akụrụngwa igwe ihe eji achọ mma maka gburugburu ebe nkwakọ ngwaahịa m?
Malite site na nyochaa mpaghara nyocha gị. Ọ dị mmiri mmiri ka ọ akọrọ? Kedu ihe dị iche na ọnọdụ okpomọkụ? Họrọ onye na-achọpụta ihe ruru eru maka gburugburu ebe ị na-arụ ọrụ dị oke mkpa.
Ntinye mmiri n'ime ihe eletriki bụ otu n'ime ihe ndị na - akpata ọdịda nchọpụta igwe. Ọ bụrụ na enwere usoro ịsa ahụ na osisi, ọ dị elu ma ọ bụ obere nrụgide? Ihe ngosi IP65 na-ekpochapu pụtara na onye na-achọpụta ihe nwere ike iguzogide nrụgide dị ala na mmiri ikuku mmiri. Ntụle IP69K pụtara ogo ọkụ na nrụgide dị elu. Ma lezienụ anya: a na-akọkarị ọkwa ndị a n'onwe ha. Aha ndị nrụpụta na ụlọ ọrụ maka ikike iguzogide ịsachasị mmiri nwere ike ịbụ akara ngosi dị mma.
Ihe ndị ahụ a na-asacha na-agụnye ndị ọrụ caustic? Ọ bụrụ otu a, eji nlezianya lebara anya na igwe anaghị agba nchara eji arụ ọrụ maka nchọpụta igwe. 31dị 316L na-eguzogide ọgwụ ndị a.
Maka gburugburu akọrọ, etinyere agba nke igwe nchọ? Idebe ebe a na-ete agba na mmiri iyi nwere ike mebie ngwaahịa gị na agba agba.
Tụleekwa mmetụta nkwụsị. Ihe mkpuchi na membranes nwere ike iyi ma ọ bụ mmetụta mmetụta. Ngosipụta ngosipụta siri ike na kiiboodu zere nkwụsị na nkwụnye ego.
Kedu otu usoro nchọpụta igwe ga-esi nwee mmetụta?
Ngosipụta nke nchọpụta igwe na-adịkarị iche dịka ọrụ ahụ si dị. Dịka ọmụmaatụ, isi ọrụ nchọpụta igwe nwere ike ịbụ ichekwa ngwa ọrụ dị mkpa, dị ka ọkpụkpọ ma ọ bụ slicer. Ebumnuche ga-abụ iwepụ ọla nke zuru oke iji mebie akụrụngwa.
N'akụkụ ọzọ nke akara ahụ, a ga-achọ ọkwa dị iche iche nke nyocha iji nyochaa ọtụtụ ngwaahịa. Ma n'ihi na nyocha ngwugwu ikpeazụ kwesịrị ịbụ nke kachasị achọ, ọbụlagodi nnabata dị elu ga-adị mkpa iji kpuchido ngwaahịa gị tupu ọ rute n'ahịa.
Controltù ndị na-achịkwa àgwà osisi gị kwesịrị inwe nlezianya achọrọ maka ihe na-emerụ emerụ, nke na-abụghị nke na-acha ọkụ, na igwe anaghị agba (ụdị 316) maka ọrụ nyocha ọ bụla. Ebumnuche ndị a kwesịrị ịgwa onye na-emepụta ihe nchọpụta ígwè ka ha wee nwee ike ịhọrọ akụrụngwa kwesịrị ekwesị maka ngwa ọ bụla. Jide n'aka na ị setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ ndị ị ga-eruli.
Otu esi amalite site na nchọpụta metal maka nkwakọ ngwaahịa
GAOGE nwere ọtụtụ afọ ahụmahụ na-emejuputa usoro nkwakọ ngwaahịa ihe eji arụ ọrụ na nchọpụta igwe.
Ndị na-achọpụta ihe bara uru bara uru maka ịchọpụta ihe ndị na-eme ka ihe na-enweghị ihe ọ bụla na ngwugwu ngwaahịa ndị a rụchara, a na-etinye ya na nri, ihe egwuregwu, ọgwụ, akwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
● User friendly ihuenyo mmetụ akara usoro
● Nchọpụta akpaaka na-achọpụta onwe ya, dabara adaba maka ndozi
● All igwe anaghị agba nchara nhazi na conveniently dị ọcha.
Mee ka ọkọlọtọ GMP na HACCP
● Auto-Jụrụ usoro na mkpu ìhè akpaaka-nkwụsị bụ nhọrọ
Metal Detector N'ihi Aluminium Foil nchịkọta
Ezigbo maka ịchọpụta ihe nchara na igwe anaghị agba nchara na ngwungwu aluminom, dị ka chocolate, ibe potato, mmiri soseji mmiri ara ehi, ngwaahịa ndị pickled wdg.
Processing Nhazi dijitalụ iji nweta akara ngosi na microcomputer dị elu iji meziwanye nchọpụta ziri ezi.
● Sensibility bụ kpam kpam na mfe mgbanwe
● Strong suppression nke ngwaahịa mmetụta nke aquatic nri ngwaahịa, oyi kpọnwụrụ nri & pickled oriri